တိုက်ရိုက်အရေးပေါ် - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးမဂ္ဂဇင်း
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 21, 2019
တိုက်ရိုက်အရေးပေါ် - Pre-ဆေးရုံစောင့်ရှောက်မှု, လူနာတင်ယာဉ်န်ဆောင်မှုများ, မီးသတ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လူထုအခြေပြုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမဂ္ဂဇင်း
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇူလိုင် 16, 2019
မာတီ Tesser	 ဇူလိုင် 15, 2019
မာတီ Tesser	 ဇူလိုင် 11, 2019
ဆီးရီးယား: 2,000 လူနာများနယူးကွင်းဆင်းဆေးရုံတွင်ကုသထက်ပို
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇူလိုင် 9, 2019
ထန်းလွမ်ဂူ: 2018 ၏အကောင်းဆုံးကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး Remembering
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇူလိုင် 8, 2019 0
တစ်ဦး Lunar ကယ်ဆယ်ရေးထမ်းစင်စုံစမ်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မာတီ Tesser	 ဇူလိုင် 18, 2019
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်, အာကာသယာဉ်မှူးများ၏ကယ်ဆယ်ရေးများအတွက်စက်ပစ္စည်းအသစ်ရေအောက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ESA ၏ Lunar ကယ်ဆယ်ရေး ...
ဣသရေလအမျိုးကိုအပေါ်တစ်ဦးဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာတော့ EMS န်ဆောင်မှုများ: ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်စစ်ပွဲ
ဥရောပတိုက်တွင်လူနာတင်ယာဉ် Uniform ။ ဝတ်ဆင်ကစမ်းသပ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ...
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇွန် 13, 2019
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: သင့်အပေါ်အာမခံထိန်းသိမ်းပါရန်ကဘယ်လို ...
မာတီ Tesser	 ဇွန် 5, 2019
မာတီ Tesser	 မေလ 22, 2019
လူနာတင်ယာဉ်ပညာရှင်များနှင့် EMS ဘို့ဖိနပ်နှိုင်းယှဉ်အလုပ်လုပ်ကိုင် ...
မာတီ Tesser	 မေလ 14, 2019
Notre-Dame de ပဲရစ်မီးသတ်တပ်မဖို့နဲ့တစ်ဦးမှကို Safe ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ် ...
မာတီ Tesser	 ဧပြီ 17, 2019
မာတီ Tesser	 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2019
တစ်ဦးပိုမိုလျင်မြန်သော Response အချိန်ရရှိရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အစ္စရေးဖြေရှင်းချက် ...
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇွန် 17, 2019
အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုအဘို့အစုတ်ယူခြင်းယူနစ်, တစ်ဦးအတွက်ဖြေရှင်းချက် ...
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇွန် 10, 2019 0
Dusseldorf လေဆိပ် Rosenbauer ARFF အပေါ်မှီခိုထားပါတယ် ...
မာတီ Tesser	 မေလ 2, 2019
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2019
EMS နှင့်ကယ်ဆယ်ရေး: မှာထွန်းသစ်စနည်းပညာများကိုရှာဖွေပါ ...
အာရပ်ကနျြးမာရေး: သင်ဘယ်တော့မှသင့် 10 အရေးကြီးသောပြသခဲ့သည် ...
မာတီ Tesser	 ဇန်နဝါရီ 25, 2019
Loading ...	နောက်ထပ်ရေးသားချက်များ load	အဘယ်သူမျှမပိုရေးသားချက်များ
သြဂုတ်လ 27, ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏ 2019 အမေရိကန်ဦးစီးဌာနကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုများအတွက်လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး၏ (HHS) ရုံး (ASPR) မှယခုနှစ်အစောပိုင်းကစိတ်ကူးများဆည်းကပ်သည်အထိလက်ခံခဲ့သည်အထိနှစ်ခုရှေ့ပြေးဆိုက်များအတွက် Applications ကို ...
TOP5အရေးပေါ်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကယောဘအခွင့်အလမ်းများကမ္ဘာတစ်ဝန်း
မာတီ Tesser	 ဇူလိုင် 1, 2019
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်ပေါ်မှာဤလ5စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်အနေအထား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ရေးအရေးပေါ်အော်ပရေတာအဖြစ်သင်လိုချင်သောဘဝရောက်ရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ EMS ပညာရှင်များ, သင်ကအလုပ်သစ်ရှာနေလဲ? နေ့တိုင်း EMS နှင့် ...
TOP5မြို့ပြကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အရေးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများကမ္ဘာတစ်ဝန်း
မာတီ Tesser	 ဇွန် 18, 2019
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်ပေါ်မှာဤရက်သတ္တပတ်၏5စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်အနေအထား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ရေးအရေးပေါ်အော်ပရေတာအဖြစ်သင်လိုချင်သောဘဝရောက်ရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ EMS ပညာရှင်များ, သင်ကအလုပ်သစ်ရှာနေလဲ? နေ့တိုင်း EMS နှင့်ကယ်ဆယ်ရေး ...
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်	 ဇွန် 3, 2019
စက်ဘီးသိပ်သည်းဒေသများရှိလူများဖို့အကူအညီပေးခြင်းများအတွက်ဆင့်ကဲလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်ညာဘက်ဖြေရှင်းချက်ပါသလဲ ငါတို့သည်သင်တို့ကရှေးခယျြနိုငျသောအခါအသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်တဲ့အခါမှာရှင်းပြဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တစ်ဦးက Cycle တုံ့ပြန်မှု ...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း TOP5EMS ယောဘသည်အခွင့်အလမ်းများ - ဥရောပ
မာတီ Tesser	 မေလ 28, 2019
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်ပေါ်မှာဤရက်သတ္တပတ်၏5စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်အနေအထား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ရွေးချယ်ရေးကျန်းမာရေး Practitioner သကဲ့သို့သင်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝရောက်ရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ EMS ပညာရှင်များ, သင်ကအလုပ်သစ်ရှာနေလဲ? နေ့တိုင်း EMS နှင့်ကယ်ဆယ်ရေး ...
မေတ္တာနှင့်ပျနှံသငျသညျအောငျမွငျဖို့သယ်ဆောင်လာတဲ့အခါ - ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီအပတ်
မာတီ Tesser	 မေလ 8, 2019
ဒီအဖှဲ့အစညျး၏ရာစေ့သောနှစ်ပတ်လည်နေ့နေစဉ်မေလ၏ 6th နှင့် 12th, 2019 အတွက် ပို. ပင်အရေးပါမှုရှေ့ဆက်ဘာရာကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီအပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကမ္ဘာ့ဖလားကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်းနီနှင့်အတူတစ်နေ့သောချည်နှောင်ဖို့အချိန်ကုန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ...
Air ကိုလူနာတင်ယာဉ်တစ်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်! -7သူနာပြုများ၏စိတ်ကူး ...
ရဟတ်ယာဉ်လေး Porto အနီးတွင်အသတ်ခံရ, ပေါ်တူဂီအတွက်ပျက်ကျ
Facebook ကတွစ်တာGoogle+ မှာRedditWhatsApp ကိုPinterestအီးမေးလ်ပို့ရန်linkedinTumblr သည်ကွေးနနျးစာ
အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်လူများတို့အားဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ခုတည်းသောဘာသာမျိုးစုံမဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်ပစ်မှတ်အသုံးပြုသူအမြောက်အများရောက်ရှိဖို့ကုမ္ပဏီများမှအရောင်းအဝယ်ဖြစ်များအတွက်အမြန်နှုန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်စံပြအလတ်စားဖြစ်၏ ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးကုမ္ပဏီများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အထူးပြုနည်းလမ်းများ၏တန်ဆာအချို့လမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှသူများမော်တော်ယာဉ်များတပ်ဆင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကုမ္ပဏီများရန်, life- ချွေတာရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုမဆိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရန်။
Piazzale Badalocchio9/ ခ
43126 Parma (PR စနစ်) - အီတလီ
ဖုန်းနံပါတ်: + 39 340 2246247
ရေးသားဖို့ info@emergency-live.com ဒါမှမဟုတ်သွားပါ ပုံစံမေးလ်.
VAT ကိုအရေအတွက်: IT02277610347
© 2019 - အရေးပေါ်တိုက်ရိုက်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။